ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုများနှင့်တိုင်ကြားချက်များ - ရေပူစတိုးဆိုင်→ခရမ်းလွန်မီးခွက်များ•ရေပေးဝေသူများ•သောက်သူများ
အတွက် Log | မှတ်ပုံတင်
ရေပိုးသန့်ဆေးအတွက်ခရမ်းလွန် LED မီးသီးများ
အကယ်၍ သင်သည်စားသုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကမူအားဖြင့်သင်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည် အကွာအဝေးကန်ထရိုက်ကနေဆုတ်ခွာပိုင်ခွင့်.
သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြခြင်းဖြင့်စာချုပ်မှနုတ်ထွက်နိုင်သည် စာချုပ်မှဆုတ်ခွာ၏ကြေငြာချက် office@waterpoint.pl သို့အောက်ပါလိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပို့သည်
ပြန်လာသောပစ္စည်းကိုအောက်ပါလိပ်စာသို့ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ချက်ချင်းပြန်ပို့ပါ။ ul ။ ဝိန်း Fort Służew 1 B / 10, 02-787 ဝါဆော , သင်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းသည့်နေ့မှ 14 ရက်အတွင်းထက်မပို။
သင်စာချုပ်မှအချိန်မီရုပ်သိမ်းနိုင်သည် 14 ရက်ပေါင်း.
စာချုပ်မှနှုတ်ထွက်မှုအတွက် ၁၄ ဆကာလစတင်သည်။
ငါတို့ပစ္စည်းကိုထုတ်ပေးသည့်စာချုပ်အတွက်၎င်းင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သငျသညျအားဖြင့်အရာတို့ကိုသိမ်းယူထံမှ သို့မဟုတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော မှလွဲ၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောတတိယပါတီ၊
ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအတွက် - စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် နေ့မှစ၍
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်သင်ပြုလုပ်သောငွေပေးချေမှုများကိုစာချုပ်မှနုတ်ထွက်ကြောင်းကြေငြာချက်လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၁၄ ရက်အတွင်းသင်ချက်ချင်းပြန်ပေးလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုများ၏ဘာသာရပ်သော စားသုံးသူများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်လုပ်သောထုတ်လုပ်မှုမရှိသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် မိမိအတစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်,
ဝန်ဆောင်မှုများ၏ဘာသာရပ်သော ပျက်စီးတတ်သောအရာ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းတို
၀ န်ဆောင်မှု၏အကြောင်းအရာသည်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်အထုပ်ထဲတွင်အပ်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်၊ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ထုပ်ပိုးမှုကိုကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအတွက်ပြန်ပို့လို့မရပါဘူးထုပ်ပိုးပြီးတာနဲ့ထုပ်ပိုးဖွင့်လှစ်ခဲ့လျှင်,
မြင်သာထင်သာအလတ်စားအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောမဟုတ်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေသည်အကယ်၍ ၀ န်ဆောင်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်စားသုံးသူ၏သဘောတူညီချက်မှ စတင်၍ စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ရန်နှင့်စာချုပ်မှနှုတ်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးပြီးနောက်၊
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ၀ ယ်ယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများသည်ချွတ်ယွင်းကြောင်းသက်သေပြပါကအာမခံအပေါ် အခြေခံ၍ သင်တိုင်ကြားနိုင်သည်။ အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာကို office@waterpoint.pl သို့မဟုတ်စာတိုက်ဖြင့်အောက်ပါလိပ်စာသို့တင်ပြခြင်းမှာအကောင်းဆုံး။ ul ။ ဝိန်း Fort Służew 1 B / 10, 02-787 ဝါဆော။
တိုင်ကြားနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုအောက်ပါလိပ်စာသို့ပို့သင့်သည်။ ul ။ ဝိန်း Fort Służew 1 B / 10, 02-787 ဝါဆော
စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ခြင်း - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့လျှင်။
စည်းကမ်းချက်အရသင်သည်တိုင်ကြားနိုင်သည် အဆိုပါချွတ်ယွင်းသတိထားမိ၏တစ်နှစ်အတွင်းသတင်းပို့ပါသို့သော်တိုင်ကြားစာတင်ရန်အချိန်သည်ရောင်းသူ၏တာ ၀ န်ယူမှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးမပြီးဆုံးနိုင်ပါ။
သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၁၄ ရက်အတွင်းသင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုတုန့်ပြန်မည် (တုန့်ပြန်သည်) ။
တိုင်ကြားချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းစည်းမျဉ်းများတွင်တွေ့နိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏အမှာစာအားအသုံးပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ [privacy_policy] တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ကြည့်ရန်လှည်း အမိန့် ဈေးဝယ်ထွက်ပါ
အဆိုပါ hotline ကနေပွင့်လင်းသည် ရုံးဖွင့်ရက်နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိ။
Waterpoint 2020 © All rights reserved